Wasiirro ka qeybgalay xaflad shahaaddooyin lagu guddoonsiinayay arday ka qalin jebisay jaamacadda Jobkay – Radio Muqdisho
Wasiirro ka qeybgalay xaflad shahaaddooyin lagu guddoonsiinayay arday ka qalin jebisay jaamacadda Jobkay
Wasiirro ka tirsan Xukuumadda iyo xildhibaanno ayaa maanta Muqdisho uga qayb galay munaasabad ay ku qalin jabinayeen arday dhamaysatay heerka koowaad ee waxbarashada jaamacadda Jobkay.
Xaflad ay ku qalinjabinayeen 500-Arday oo dhameystay waxabarshada heerka Koowaad ee jaamacadda Jobkey islamarkaana ka baxay kuliyadaha klala duwan ee Jaamacaadaasi ayaa waxaa ka qeybgalay mas’uuliyiin ay ka mid ahaayeen wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Mudane Maxamed Cabdullahi Xasan Nuux, wasiir ku xigeenka Shaqada iyo arrimaha Bulshada Cismana Libaax Ibraahim, wasiir ku xigeenka howlaha guud iyo dib u dhiska Maxamed Cumar Geeddi, Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa , gudoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir ee dhinaca howlaha guud iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada.
dhamaan Mas’uuliyiintii ka hadlay Munaasabadda ayaa waxa ay bogaadiyeen Ardayda maanta qalinjabiyay, iyagoo ku boorrinayay inay ka shaqeeyaan Hormarka dalka.
Nasriin Xasan Maxamed oo u ku hadleysay magaca Ardaydii ka qalinjabisay Jaamacadda Jobkey ayaa u mahadcelisay macalimiintii wax soo baray iyo Araydii ay waqtiga badan wax islasoo barteen.
Gudoomiyaha Jaamacadda Jobkey Professor C/Casiis Caagane Cabdisamad ayaa sheegay in Jaamacadda ay dabooshay baahiyo badan oo dhanka waxbarashada ah oo dalka kajiray islamarkaana ay badbaadisay Jaamacadda Jobkey Mustaqbalka Arday badan oo markii hore waxbarasho la’aan ahaa.
Wasiir ku xigeenka Shaqada iyo Arimaha Bulshada Xukuumada Somaaliya Mudane Cismaan Libaax Ibraahim oo qudbad ka jeedinayay Xafladii qalinjabinta aheyd ee loo qabtay Ardayda dhameystay jaamacdda Jobkey ayaa Waxa uu xusay in Wasaarada ay qorsheyneyso inay shaqo u abuurto dhalinyarada faraha badan ee ka baxa jaamacadaha dalka.
Wasiirka dhalinyarada iyo Ciyaaraha Xukuumada Somaaliya Mudane Maxamed Cabdullahi Xasan Nuux ayaa arrin wanaagsan ku tilmamaay in Xaflad loo qabto Boqolaal Arday oo dalkooda wax ku bartay wuxuna kula dardaarmay Ardayda inay dhanka wanaagsna u adeegsadaan cilmiga ay barteen.
Gagabagabadii Munaasabada ayaa Shahaadooyinkoodii la siiyay ardayda xafladda Qalinjabinta ah loo qabtay ee dhameystay waxbarashada heerka koowaad ee Jaamacadda Jobkey kuwaas oo tiradiifdu gaareysay ilaa 500 –Arday.
Baarlamanka oo ansixiyay dhismaha golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed
Lix ka tirsana maleeshiyaadka Shabaab oo lagu dilay duleedka Beledweyne “Dhageyso”
Lix ka tirsana maleeshiyaadka Shabaab oo lagu dilay duleedka Beledweyne "Dhageyso"